Vao azo tao an-gabone ny alin’ny 20 jolay teo ilay zaza dia nanadihady tao Betroka ny mpitandro filaminana nitady izay vehivavy bevohoka nefa tsy nitaiza. Noho ny maha reny tera-bao azy izay atahorana amin’ny fahaverezan-dra sy ny sovoka dia tsy nalefa fampanoavana avy hatrany. Tanjona ny hialana ny fampidirana am-ponja vonjimaika ilay vehivavy mbola marefo ka niandry azy natanjaka afaka herinandro vao nakarina fitsarana. Karohin’ny manampahefana koa amin’izao ilay lehilahy nahabevohoka azy. Marihina fa avotra ilay zaza saingy andro vitsy taty aoriana dia maty.
Navotana mpanao gazety
I Renaud Hubert Herinandraina no niezaka nanavotra ilay zaza tao anaty WC ny misasakalin’ny 20 jolay, raha nikiakiaka nitomany. Nomeny anarana hoe : “Saphirah Narovanjanahary” ilay zaza ary voalazan’ity namana mpanao gazety ity fa efa niraiki-po taminy saingy andro vitsy taty aoriana dia tsy azo.
“Nalahelo mafy aho fa efa nifanakahazo am-po ery izahay mianaka, kinanjo tsy afa-manoatra fa nodimandry i Saphirah kely”, hoy ity mpilaza vaovao ity sady tompon’andraikitra eo amin’ny FLM Katedraly Tranovato Betroka. Tsiahivina moa fa vao azo tao an-gabone ilay zaza dia nentina tany amin’ny Ivontoeram-pitsaboana mba hodiovina sy homena ny sakafo ary ny hery fiarovana sahaza azy.